Vagadziri veMitemo veUS Vazivisa Mabhiri Akawanda Ekudzora Matekinoroji eTechnical uye Aigona Kumisikidza Mafambiro | Linux Vakapindwa muropa
MuU.S zvinhu zviri kuda kuchinja kune tech giants mumakore mashoma anoteverakubvira pane runyerekupe rwunotenderera muWashington izvo inoratidza maDemocrat ari kutenderera antitrust mabhiri izvo zvinogona kugadzirisazve anozivikanwa mabhizimusi mamodheru emakambani makuru tech
Kuzivisa zvirevo Inotevera kuongororwa kwakakosha kweantitrust muindasitiri ye tech neantitrust subcommittee yeImba Yekutonga. Iyo pani yakawana kuti Facebook, Amazon, Alphabet (Mubereki weGoogle) uye Apple vane "monopoly simba" mumisika yavo.
Mabhiri anotarisirwa kurerutsa kupatsanurwa kwemakambani makuru ehunyanzvi, kuvadzivirira kusangana, uye kukanganisa maitiro evanokwikwidza.
Huwandu hwekutsvaga antitrust, kunyanya mukusarudzika uye kushungurudzwa kwemaitiro enzvimbo, uye kuferefetwa kwekutyorwa kwedata kunosanganisira Big Tech, yakaputika mumakore mashanu apfuura.
MuEurope, sekuUnited States, Aya ma tech giants anopomerwa kudzivirira kana kuuraya makwikwi kutenga vanogona kukwikwidza vanokwikwidza uye kushandisa zvisina kunaka bhizinesi maitiro kukwezva vatengi. Kunyangwe izvi dzimwe nguva zvichitungamira mukuferefeta uye gare gare faindi hombe, mhosva dzacho dzinoenderera. Kupedza izvi, vamwe vanofunga kutamba kadhi rinobvarura.
"Parizvino, matekinoroji ehurongwa husina kutongwa ane simba rakawandisa pamusoro pehupfumi hwedu," akadaro Rep. David Cicilline, sachigaro wekomiti yeantitrust. “Vari pachinzvimbo chakasarudzika chekusarudza vanenge vakunda kana kukundwa, kuparadza mabhizinesi madiki, kukwidza mitengo yevatengi nekudzinga vanhu pabasa. "Hurongwa hwedu huchaenzanisira nhandare uye huve nechokwadi chekuti vakapfuma uye vane simba tekinoroji vanotevedzera mitemo yakafanana neyedu tese."
Yekutanga yemabhiri matsva mashanu ndeye iyo American Online Sarudzo uye Innovation Mutemo. Izvo zvaizodzivirira makambani anoshanda mue-commerce pamusika kubva kupa izvo zvigadzirwa zvavanotengesa kuburikidza nemusika iwo mukana wakasarudzika pamusoro pezvinhu zvinotengeswa nevatengesi vakazvimiririra. Bhiri iri zvakare rine chinangwa chekurambidza vanogadzira masisitimu anoshanda kubva mukupa maficha akaiswa kare ayo vashandisi vasingakwanise kubvisa
Mutemo wemikana uye makwikwi emaPuratifomu: inotarisa kubatanidzwa uye kuwanikwa. Vagadziri vemitemo vanotsigira bhiri iri vanotsvaga kurambidza hofori dzehunyanzvi kubva mukutenga makambani madiki ayo anotyisidzira. Uye zvakare, iko kurudziro kwaizovharira zviwanikwa izvo "zvinowedzera kana kusimbisa simba remisika yemapuratifomu epamhepo."
Iyo Monopoly Mutemo Kupedzisa Platform, bhiri rechitatu, rinogona Maererano nemishumo kumanikidza mamwe magiant tech kuti abvise zvikamu zvebhizinesi ravo.
Chinyorwa chebhiri chinotsanangura kuti wepamhepo chikuva opareta akafukidzwa nemutemo haakwanise kuchengetedza mutsara webhizinesi kana iro bhizinesi richishandisa chikuva charo "pakutengesa kana kupihwa zvigadzirwa kana masevhisi." Izvo zvinogona kuda kuti Apple irege kupa yayo maapplication paApp Store kana kudzivirira Amazon kubva mukupa ayo emukati mabhenefiti mukana pane wevatatu-bato vatengesi vanotengesa papuratifomu yayo.
Bhiri yechina inonzi Mutemo wekuwedzera kuenderana uye kukwikwidza painogonesa shanduko yebasa. Chinangwa chayo ndechekuita kuti zvive nyore kune vatengi kushandura pakati pemakwikwi emadhijitari masevhisi nekurerutsa maitiro ekufambisa dhata kubva kune imwe chikuva ichienda pane imwe. Kusvikira kumugumo mumwe chete, vanoshanda papuratifomu vaizodikanwa kuti vape "mapenji akajeka anowanikwa kune vechitatu mapato (kusanganisira application programmes interfaces)" kuitira kuti vashandisi vakwanise kurodha pasi data ravo.
Kune rimwe divi iyo Vatsigiri vemaindasitiri vanoona mabhiri sekuwandisa izvo zvinokuvadza kumabhizimusi nevatengi.
Adam Kovacevich, nhengo ye tech-yakatsigirwa lobbyist Chamber of Progress, akamhan'arira mimwe yemabhiri ekurambidza zvinopihwa zvakakurumbira seAmazon Prime Prime shipping service kana maitiro akaita seGoogle kuisa makadhi avo pamusoro. Kubva pamhedzisiro yekutsvaga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Vamiriri vemitemo veUS vakaunza mabhiri akati wandei ekugadzirisa matekinoroji ehunyanzvi uye vanogona kuseta zvisati zvaitika
Zvinoseka kuti vanodzika mitemo vanofunga kuti mapuratifomu ehunyanzvi haatungamirirwe kana zvese zvatanga kubva kunyoreswa kwe "Intellectual Property" yezviri mitsetse yekodhi, ine masevhisi aya matekinoroji anoteerera mitemo yakaita sekudzivirira mhosva dzekuvenga, dzinopa pachena regedza kuchokwadi chekuti chikuva hachikwanise kubvumidza vashandisi kushoropodza mamwe mapoka, kunyanya kana vari vashoma.